Wariye ku Xirnaa Muqdisho oo Maxkamad la Keenay
Jimco, Bisha Shanaad 06, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 23:37
Cabdicasiis KorontoxCabdicasiis Koronto
Weriye Cabdicasiis Cabdinuur Ibraahim Koronto oo dhowaan ay xireen ciidamada dambi-baadhista Soomaaliya ayaa maanta la keenay maxkamad ku talala magaalada Muqdishu. inkatsoo markii dmabe dabme dib loo dhigay dhagaysiga maxkamadda.
Weriyaha ayaa sheegay in loo haysto warar lagu daabacay warbaahinta qaarkeed oo ku saabsan kufsi la sheegay inuu ka dhacay mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee magaalada Muqdishu.
Maxamed Ibraahim Isaaq “Baaksitaan” oo ah Xoghayaha Guud ee Ururuka Sxufiyiinta Qaranka, ayaa Haaruun Macruuf oo ka tirsan VOA uga waramay maxkamadda wariyaha ee maanta iyo halka ay haatan wax marayaan.
Wareysiga Maxamed Baaskistaan oo dhan halka hoose ka dhagayso.
Wareysiga Maxamed Baakistaan